सुन Archives - Lokpati.com
Tag - सुन
काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँले सस्तो भएको छ। अघिल्लो दिन ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आजकालागि तेजावी सुनको प्रतितेला...
काठमाडौं: बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले घटेको छ।
मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कायम भएको सुनको मूल्य सोमबार घटेर ९२ हजार रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले...
काठमाडौं। लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य दुई दिनयता सामान्य रूपमा घट्न थालेको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा १ सय रुपैयाँले घटेर शुक्रबार सुनको कारोबार मूल्य प्रतितोला ९५ हजार ३ सय रुपैयाँ भएको छ।
गत साताको अन्तिम दिन प्रतितोला ९४...
लगातार उकालो लागेको सुन सस्तियो
काठमाडौं । लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य बढ्ने क्रममा ब्रेक लाग्दै एकैदिन तोलामा १३ सय रुपैयाँले सस्तिएको छ । यससँगै बिहीबार सुनको कारोबार मूल्य तोलाको ९५ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले...
सुनको भाउ ८ सयले बढ्याे
काठमाडौं । स्थानिय बजारमा आईतबार स्थिर रहेको सुनको भाउ सोमवार प्रतितोला रू. ८०० ले उकालो लागेको छ । आइतवार स्थिर रहेको पहेँलो धातु सुनको मूल्यमा सोमवार एकै पटक वृद्धि भएको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला...
काठमाडौं। मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। स्थानिय बजारमा मंगलवार पहेँलो धातु सुनको भाउ रू. ८०० ले ओरालो लागेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलवार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ९४ हजार १०० मा...
सुनको भाउ फेरी उकालो लाग्यो
काठमाडौं।, सोमबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ। यस दिन सुन तोलामा ७०० रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
.नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ९०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा...
काठमाडौं, ९ पुस। सुनको मूल्य तीन दिनमै प्रतितोला १२ सय रुपैयाँले बढेको छ। तीन दिनअघि अर्थात् गत आइतबार ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज बुधबार ७२ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
सुनको मूल्य पुरानो रेकर्डलाई पछ्याउँदै अघि...
बुढानीलकण्ठमा देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच २० मिनेट छलफल